Kunzwisisa iyo Series LLC / Yakatemerwa Dhizaina Kambani
Kunzwisisa Series Series
Chii chinonzi Series LLC?
A akateedzana LLC ikambani ine chikwereti chakashomeka apo nhevedzano yega yega inoshanda seyakaganhurirwa LLC yezvinangwa zvekuchengetedza zvikwereti. Iyo yakafanana neimwe kabhineti iyo ine akawanda cubby maburi. Mhosva inopesana neakateedzana haina zvazvinoita kune mamwe. Vatengesi vezvezvivakwa vanowanzovashandisa kuitira kuti nhevedzano yega yega ive yavo yega pfuma. Mhosva pane imwe yezvivakwa, semuenzaniso, haifumure zvimwe.
Iyo inoumbwa senge yakajairwa LLC, kunze kwekunge zvinyorwa zvaro zvekuumbwa zvinofanirwa kutaura zvakananga kuti ine mvumo yekuumba dzakateedzana. Iyo yekutanga LLC dzimwe nguva inonzi tenzi LLC, base LLC, amburera LLC, kana mubereki LLC. Iyo nhevedzano iyo inogadzira inogona zvakare kuenda nemazita akasiyana. Ivo vakanongedzerwa kwazi indasitiri semasero, midziyo, zvikamu, zvikamu, kana zvikamu. Kamwe iyo yekutanga tenzi LLC yagadzirwa, inogona kugadzira mamwe akateedzana sekudikanwa kuchimuka.
Pakutanga yakavambwa muDelaware muna 1996, iyo Series LLC (SLLC) iri, se-zvakadaro, inozivikanwa zvishoma mudziyo wekudzivirira nhumbi. Maseru mashoma chete kunze kweDelaware anotendera kuisirwa zviri pamutemo kweSLLC mukati memasimba avo. Aya ndeaya: Alabama, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nevada, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, uye Dunhu reWashington. California ine imwechete chimiro yakanangana neSLLC. Iyo haina gadziriro yekumisikidzwa kweakateedzana maAdvs.
Nekudaro, iyo inobvumidza maSLLC akaumbwa mune imwe nyika kuti ashande saizvozvi muCalifornia, chero vakanyoresa mudunhu sechinhu chekunze. Kunyangwe akateedzana LLC akafanana nekumisikidza makambani mazhinji, inopa chimiro chinowanzo kuve chisingadhuri kumisikidza uye nyore kubata. Sezvo nechero chekushandisa chekuchengetedza nhumbi, SLLC ine zvayakanakira nekuipira. Zvinogara zvakanaka kuongorora sarudzo dzakasiyana dzeako bhizinesi mamiriro usati waita sarudzo yekupedzisira.
The tenzi LLC inogadzira chibvumirano chekushanda chinosimbisa iyo pasi mashandiro emitemo akateedzana. Nekudaro, ichi chibvumirano chekushanda chinobvumidza kune yega yega nhevedzano kugadzira mitemo yakasarudzika yemabasa ayo chaiwo. Iyo master LLC inodikanwa kufaira zvinyorwa zvekuumbwa kamwe chete. Imwe neimwe yekuwedzera akateedzana mushure maizvozvo ichagadzirwa kuburikidza nenzira dzemukati dzakatemwa muchibvumirano chekushanda, kana kupatsanura mafirita eruzhinji, zvinoenderana nedare.
Nhepfenyuro yega yega inoshanda sechinhu chakasarudzika chine zita rayo pachayo, maakaundi ebhengi, uye mabhuku eakaunzi uye marekodhi. Vanogona kuve nenhengo dzakasiyana nemaneja, vane kodzero uye zvisungo zvinowanzosiyana kubva pane akateedzana kusvika pane akateedzana. Nhepfenyuro yega yega inogona kuitisa bhizinesi rayo inosanganisira kupinda muzvibvumirano uye kubata mazita kuzvivakwa. Midziyo inochengetwa nechero nhevedzano yakasarudzika uye yakaparadzaniswa nenhumbi dzinowanikwa nemamwe akateedzana pasi peiyo tenzi LLC. Nekuda kweizvi, yega yega akateedzana anodzivirirwa kubva kuzvikwereti zvinogona kukonzereswa neimwe yakateedzana. Iyo yakateedzana LLC inopa yakanakisa yeaseti chikwereti chengetedzo pasina yakaderera mutengo pane kumisikidza yakaparadzana LLC kune yega nhumbi.
Series LLC vs. Kubata Kambani
Asati agadzira akateedzana ma LLC, mabhizinesi aiwanzoshandisa makambani akabata kupatsanura midziyo uye kudzikamisa zvikwereti. Izvi zvinoda kuumbwa kweakawanda ma LLC. Imwe neimwe LLC ine yakasarudzika seti kana boka rezvinhu, rakasiyana nemidziyo yakachengetwa mune imwe LLC. Imwe neimwe LLC ichave zvakare ichingova nemhosva yechimwe chikwereti chavanogona kuwana. Aya maAdvs ega anozoiswa pasi pekambani inobata. A kambani inobata haishingairi kuita bhizinesi. Seizvo zita rayo rinoratidzira, rinongobata chimwe chinhu — senge ivhu, dzimba, kana mota. Mune ino kesi, inobata iro boka reV LLCs iro rimwe nerimwe rinodzora rakasarudzika nhumbi. Nguva yega yega muridzi webhizinesi paanoda kuisa pfuma pasi pekambani inobata, imwe LLC inofanirwa kugadzirwa.
Yakateedzana LLC chimiro chinoshanda zvakanyanya. Izvo zvinoda kumisikidzwa kweye chete tenzi LLC pane akati wandei maAdv. Mune mamwe matunhu anoona akateedzana maAdvs, chete tenzi LLC ndiye anofanirwa kuisa chitupa chekuumbwa nemishumo yegore. Mune zvimwe zviitiko, senge muTexas, chete master LLC ndiyo inofanirwa kufaira mutero.
Uyezve, kusiyana nekambani inobata, iyo master LLC inogona kuitisa bhizinesi rayo uye kugadzira mari. Iyo inogona kunyange kubatsira kutungamira kukura kwega kwega akateedzana pasi pemaambura ayo mukati memitemo yesungano yayo yekushanda.
Zvakanakira Series Series?
Sezvinoonekwa pamusoro apa, mukana wakajeka weakateedzana LLC kugona kwayo kuchengetedza zviwanikwa zveimwe nhete kubva muzvikwereti zveimwe zvakateedzana, kana kunyangwe kubva kuzvikwereti zve master LLC pachayo. Iko kune bakoat zvine chekuita neiyi mukana zvakadaro. Series LLC mamaneja anofanirwa kutarisira kuchengeta yega yega dzakateedzana uye dzakasiyana kubva kune mamwe akateedzana pasi peatenzi LLC. Mari yekutonga nemabasa zvinogona kugoverwa pakati pezviteedzerano, asi kwete marekodhi ekuverenga, maakaundi ebhengi, kana mamwe magwaro akafanana. Kuita izvi kungangoita kuti rusvingo rwechisimba pakati pezvikamu zvive nyore kutyora mudambudziko repamutemo.
Imwe mukana weSLLC ndiko kushanduka kwayo kunoshamisa. Iyo yakateedzana mukati meatenzi LLC inogona kuve nenhengo dzayo, chinangwa, uye zvekuchengetedza zvido. Inogona kuve yako, kuwana, kana kutengesa zvakasiyana siyana zvinooneka uye zvisingaoneki zvinhu, zvinosanganisira patent uye yehungwaru pfuma. Iyo midziyo mune akateedzana inogona kuchengetwa muzita reimwe yeakateedzana kana muzita raishe LLC. Mumwe anogona kusarudza musanangurwa maneja wepachivande. Pamusoro pezvo, tenzi LLC vagadziri vanonakidzwa nerusununguko rwakakwana rwechibvumirano mukugadzira zvibvumirano zvavo zvekushanda. Nekudaro, iwo akateedzana LLC anogona, mukati memiganhu yepamutemo, kuve semunhu mumwe uye akasarudzika sekugona kwevagadziri vayo.
Panyaya dzemitero nezvakarongeka, sekuchengetedza marekodhi emakambani, akateedzana LLC ane chimiro chisina kuomarara kupfuura chekambani ine ma subsidiary. Nekuda kweizvi, ivo vari nyore kumhanya uye kubata. Mune mamwe matunhu, rendi inobhadharwa kune imwe nhevedzano mukati meiyo tenzi LLC ingave isingabhadhariswe mutero. Uye, sekureba sekurekodhi senge accounting uye maakaundi ebhengi akachengetedzwa zvakasiyana, akateedzana anogona kupihwa pamwe chete, izvo zvinogona kutungamira mukuwedzera kuchengetedza.
Kukanganisa kweSystem LLCs
Kunyangwe paine zvazvakanakira, mumwe angazoshamisika kuti nei akateedzana maAdvs achizivikanwa mune mashoma chete matunhu. Imwe huru yekukanganisa kweakateedzana LLC iri mune isina kuongororwa mhedzisiro mhedzisiro yehunhu hwayo chimiro. Kuve iri hama nyowani chiridzwa, haisati iine yakareba litigation nhoroondo. Simba rezvekudzivirirwa kwaro kwenjodzi harina kuyedzwa zvakanyanya-uye rikawanikwa richishanda mushe-mukati meAmerican system system. Pakave pasina kumbove nemhosva dzakakwikwidzwa mudare dzinopa mhinduro (zvisarudzo zvepamutemo) kumibvunzo yakakosha uye kunetseka. Semuenzaniso, ko dare redzimhosva mune isiri-nhepfenyuro LLC nyika inobvuma kupatsanurwa kwemhosva pakati pezviteedzero pasi peiyo imwechete tenzi LLC? Iko hakuna kungove kwakaringana kwepamutemo matanho ekuenderera mberi.
Pamusoro pezvo, nyika dzinoti dzinoziva iyo SLLC chimiro inoratidza dzakasiyana nhanho dzemitemo inodzora chimbo. Dzimwe nyika, senge Illinois, dzinoda akateedzana LLC vagadziri kutevedzera inoomesera mitemo. Mamwe matunhu, saDelaware, anoteera mashoma maitiro akaomarara ekuumba. Nekuda kwekuparadzaniswa, ko nyika ine yakanyanya kunetsa nhepfenyuro LLC set-up inoziva kutendeseka kwechiteedzero LLC yakaumbwa mudunhu risinganyore kune iwo akafanana seti yemirau? Panguva ino, mhinduro haina kujeka.
Iko zvakare kune kusava nechokwadi kwakakomberedza dzakateedzana maAdvs mune yemutero arena. Vateresi vemitero havasati vaziva mabatiro avachaitwa kubva kudunhu kuenda kune rimwe nekuda kwemitero. Nekudaro, vazhinji vanoramba vakangwarira nekurumbidza akateedzana maAdvs kune avo vatengi. IRS haisati yapa chero mirau yakajeka paSLLCs. Kusvikira zvaita, akateedzana maAdvs angangoramba ari chishandiso chete akashinga uye asingatyi anoshandisa. Hapana bhizinesi kana muridzi weaseti anoda kubatwa akatsetseka-tsoka neiyo IRS. Kusvikira nyika neIRS vaita mutero wakajeka wemitero maererano neakateedzana maAdvs, nyanzvi dzemitero dzicharamba dzakabata chimbo ichi pakureba kweruoko.
Series LLC vagadziri vanogona zvakare kusangana nehumwe huwandu hwekupokana kubva kumabhangi kana vachivhura maakaundi eakasiyana akateedzana pasi peatenzi LLC. Mashoma mabhangi kana avo madhipatimendi epamutemo vanoziva nekushanda kwemukati meakateedzana maAdv. Nekuda kweizvi, vanogona kumanikidza zvimwe zvinodiwa kana mamwe magwaro akaomarara kubva kune vanogadzira SLLC. Kuchengetedza chikwereti chemuunganidzwa kunogona kuratidza kuve kunonetsa uye kunonetesa nekuda kwechikonzero chimwe chete.
Series LLCs zvishandiso zvinobatsira. Ivo vanopa dziviriro yeasset, vane yakapusa asi inoshanda chimiro, uye vanoshanduka zvakanyanya. Ivo vanopa vagadziri uye nhengo dzakasiyana-siyana sarudzo sekuseta, kukura, uye kuchengetedza zvavanofarira. Imwe yakateedzana LLC inogona kuburitsa mabhenefiti akafanana neakawanda maSoftware ari pasi pekambani inobata. Nekuti maSoftware achiri zvishandiso zvitsva, zvisinei, ivo vachiri vasina kuyedzwa munhandare yepamutemo. Ichi ndicho chimwe chezvikanganiso zvaro zvikuru. Pamusoro pezvo, hapana ratidziro yemutero yakajeka yakaburitswa neiyo IRS kana hurumende dzenyika maererano neSLLCs kusvika zvino. Izvi zvinoita kuti vanopa mazano emitero vangwarire kuvakurudzira kune vatengi vavo. Kune iwo mazhinji chikamu, akateedzana LLC inoramba iri nzvimbo isingazivikanwe muasset kuchengetedza nyika. Zano rakanakisa saka, ringave rekuenderera nekungwarira uye kutsvaga kutungamira kwenyanzvi mumunda.